အဆင့်(၁) ဒေါင်းလုဒ်ရယူထားသော KeyMagic-v2.0Pre-4 ဖိုင်အား နှစ်ချက်နှိပ်၍ အဆင့်ဆင့် Install လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဆင့်(၂) Install ထည့်သွင်းခြင်းပြီးဆုံး၍ Run လိုက်ပါက အောက်တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း Windows taskbar တွင် keymagic icon ပုံလေးနဲ့တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ icon ကိုမတွေ့ရဖြစ်နေပါက အဆိုပါမြှားပုံ iconကိုနှိပ်ပြီး KeyMagic ကို task bar ပေါ်သို့ဖိဆွဲချပေးလိုက်ပါ။ −စာရိုက်ရန်လက်ကွက် keyboard ၅မျိုးထည့်သွင်းထား ပြီ:မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာပြောင်းလဲရန် keyboard ပေါ်ရှိ Ctrl ကိုဖိထားပြီ: Spacebar ကိုတစ်ချက်ခြင်းနှိပ်ပေးခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲအသုံး ပြုနိုင်ပါသည်။ဒါ့အပြင် Add ကိုနိုပ်၍မိမိနှစ်သက်ရာ Keyboard(.Km2) ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သလို Remove ကိုနိုပ်၍မိမိအသုံးမပြု လိုသည့် Keyboard ကိုဖယ်ထုတ်နိုင်ပါသည်။ လက်ကွက်များရိုက်နည်းကိုလည်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇော်ဂျီ-ယူနီကုဒ် ဇော်ဂျီလက်ကွက်အတိုင်းရိုက်နိုက်တဲ့ Keyboard ဖြစ်ပါသည်။ နေကောင်းလား ​ေ+န+​ေ+က+ာ+င+်+း+လ+ာ+း ထမင်းစားပြီးပြီလား ထ+မ+င+်+း+စ+ာ+း+​ြ+ပ+ီ+း+​ြ+ပ+ီ+လ+ာ+း သင်္ဘော သ+​ေ+ဘ+င်္+ာ ကမ္ဘာ က+မ+`+ဘ+ာ (` […]
Myanmar Unicode တွင် keyboard လက်ကွက်များစွာရှိရာ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် မိမိနှစ်သက်ရာ keyboard လက်ကွက်ကို ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။လက်ကွက်များစွာထဲမှ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ လက်ကွက်ကို အချိန်တိုအတွင်း လက်ကွက်တစ်ခုမှ အခြားလက်ကွက်တစ်ခုသို့ လွယ်ကူ လျှင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ရန် keymagic အတွင်းမိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ လက်ကွက်များကို ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ Pyidaungsu MM Keyboard ကိုနမူနာအဖြစ်ထည့်သွင်းရှင်းပြထားပါသည်။အခြားသောလက်ကွက်များကိုလည်းဤနည်းအတိုင်းထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Pyidaungsu MM အဆင့် (၁) Keymagic သို့အရင်သွားပါ။ အဆင့် (၂) Keymagic ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်အောက်ပါအတိုင်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ အဆင့် (၃) ပြီးရင် Add button အား တစ်ချက်နိုပ်ပါ။ အဆင့် (၄) Windows Explorer ပေါ်လာပြီဆိုပါကဒေါင်းလုဒ်ရယူထားသော Keyboard လက်ကွက် ( Pyidaungsu MM.km2 ) […]
Apple ကွန်ပျူတာတွင် Keymagic ထည့်သွင်းနည်း
Keymagic ရယူရန် 1. Keymagic Keyboard ကို ရယူပြီးရင် ၂-ချက်နှိပ်ပြီး ဆက်လုပ်( install) သွားပါ။ 2.System Preferences -> Language & Text ကိုဖွင့်ပါ။ Input Sources tab ကိုရွေးပါ။KeyMagic ကိုရှာပါ။KeyMagic ကိုအမှန်ခြစ်ပါ။ 3. ပြီးသွားရင် Key လက်ကွက်တွေရှိတဲ့နေရာမှာ(နိုင်ငံအလံ ရှိတဲ့ နေရာ) နှိပ်လိုက်ပါ။ ပွင့်လာရင် Keymagic ကိုရွေးပေးရင်ရပြီ။ 4. စာရိုက်တော့မယ်ဆိုရင် အလံရှိတဲ့ လက်ကွက်နေရာမှာ Keymagic ကိုရွေး ရမယ်။ Keymagic က လက်ကွက် ၃-၄ မျိုးလောက် ထည့်ပေးထားမှာပါ။ 5. အင်္ဂလိပ်ကီးဘုတ်နှင့် မြန်မာကီးဘုတ်ကို (Command + Space bar) နှိပ်ပြီး တစ်လှည့်စီ ပြောင်းလဲ […]